Madaxweynaha Jabuuti oo maanta la hadlaya Baarlamaanka Soomaaliya – Kalfadhi
Madaxweynaha Jabuuti oo maanta la hadlaya Baarlamaanka Soomaaliya
Madaxweynaha Jabuuti, Cismaaciil Cumar Geelle, ayaa maanta Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya kula hadli doona Xarunta Jeneraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho. Madaxweyne Geelle, oo shalay soo gaaray Muqdisho, ayaa qeyb ka mid ah booqashadiisa Soomaaliya waxay Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka u sheegeen Kalfadhi iney ahayd inuu la hadlo Xildhibaannada Soomaaliya.
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa maanta khudbad u jeedinaya Xildhibaanada Labada Gole ee BJFS” ayaa lagu yiri dhigaal uu goluhu kusoo daabacay boggiisa Feysbuugga. “Kulanka ayaa waxa uu ka dhacaya Xarunta Jeneraal Kaahiye (Iskool Buluusiya) ee degmada Xamar Jajab” ayaa la sii raaciyey dhigaalkaas.
Qeyb ka mid ah Guddoonka Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka ayaa lagu soo warramayaa in ay joogaan goobta uu Madaxweyne Geelle kula hadli doono Baarlamaanka dalka, halkaas oo la filaayo in ay goordhaw gaaraan Madaxda Dalka, oo uu la socdo Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle.
Sida uu Kalfadhi ku helay xog, waxa ay Guddoonka Baarlamaanka iyo Hogaanka Dalka joogaan hadda xarunta cusub ee Safaaradda Jabuuti, oo maanta lagu wado in xariga laga jaro, halkaas oo uu sidoo kale joogo Madaxweynaha Jabuuti, iyada oo marka uu xariga ka jaro Safaaraddiisa Soomaaliya uu Geelle imaan doono Xarunta Jeneraal Kaahiye, oo hadda isu diyaarineysa in uu maanta Madaxweyne Geelle kula hadlo Baarlamaanka Soomaaliya.
Dhigaalka Golaha Shacabka ee Fadhiga Baarlamaanka Maanta
Xildhibaan Ibbi: Madaxweynaha Jabuuti hadduusan ahaan lahayn wax badan baa Soomaaliya ka halaabi lahaa!
Xildhibaan Khadiija Diiriye oo guusha Orodyahan Cabdullaahi Jaamac ku tilmaantay mid guul ka weyn